Antsirabe Tra-tehaka ilay mpanao aferana merkiora sandoka
Tra-tehaky ny polisy ny lehilahy iray ikoizana amin’ny fisolokiana merkiora sandoka, manerana ny faritra maro.
Avy any amin’ny Faritra Morondava izy ity no nandranjo tao amin’ny renivohitry ny faritra Vakinankaratra. Nosamborin’ny polisy ny alatsinainy 5 aogositra farany teo, tany Ambavahadimangatsiaka, Antsirabe io lehilahy iray io izay milaza ho mpivarotra merkiora. Ity lehilahy voasambotra ity dia mpisoloky olona amin'ny alalan'ny fivarotana « mercure » hosoka, ary efa misy fitarainana voarain’ny manampahefana avy amin'ireo olona nahazoany vola amin'io asa ratsiny io. Tamin’ny fanadihadiana natao no nahalalana fa any Miandrivazo ity lehilahy ity no tena mipetraka ary efa misy olona saika hosolokiany indray tany Antsirabe ka izao izy tra-tehaka tao amina trano fandraisam-bahiny iray tao Antsirabe izao. Mbola tratra teny aminy moa ny mercure hosoka izay nataony tao anaty tavoahangy, araka ny fampitam-baovaon’ny polisim-pirenena.